Shirkadda Apple oo soo saartay saacad caaqil ah - BBC News Somali
Shirkadda Apple oo soo saartay saacad caaqil ah
Image caption Saacaddani aya ah mic casri ah oo aan horay loo arkin.
Shirkadda Apple ayaa sheegtay in qiimaha saacad caaqil ah oo ay soo saartay uu u dhexayn doono 400 oo doolar iyo 17,000 oo doollar, iyadoo qiimahaasi uu ku xiran yahay nooca laga sameeyay saacaddaasi,
Saacaddani caaqilka ah ee Apple ma aha oo kaliya in ay qofka u sheegayso wakhtiga basle waxaa kale oo ay ka caawinaysaa in ay qofku ay u sahasho hawlo kale oo si gaar ah uu u qaban lahaa.
Hawlahaasi waxaa ka mid ah in aad ka dirto ama akhrisato farriin-qoraaleed, intarneedka oo aad daalacato ama dhaqdhaqaaqa uu qofka saacadda sita samaynayo inta uu gaarsiisan yahay.
Xitaa qofka saacadda sita waxaa suurtogal u ah in uu wax ku iibsado isaga oo saacadda isticmaalaya ama uu muusig dhegaysto, ama uu ogaado garaaca wadnihisa, ama xitaa uu u adeegsado sidii furaha gaariga.
Saddex nooc ayay suuqa ku soo gali doontaa, iyada oo qiimahana uu u dhaxayn doono $400 - $20,000.